उत्तरदायी बनौं | MoBank गरौं| NIC Asia Bank
डिजिटल नेपालमा सबैलाई आह्वान
मोबैंक चलाउनलाई गरौं प्रोत्साहन
उत्तरदायी बनौं, MoBank गरौं !
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न एन आई सी एशिया बैंक आह्वान गर्दछ, MoBank गराैं योजना ।
Get cashback on various Offer
On Internet Bill Payment 2078 Jestha (2,10,11,19,20,28,29)
On TV Bill Payment 2078 Jestha (3,4,12,13,21,22,30,31)
On NTC/NCELL Data Pack 2078 Jestha (5,6,14,15,23,24)
On Water Bill Payment 2078 Jestha (7,16,25)
On Insurance Premium 2078 Jestha (8,17,26)
On Payment to Capital 2078 Jestha (9,18,27)
मोबैंक नै किन गर्ने ?
मोबैंक प्रयोग गर्दा पाइने प्रमुख अफरहरु
घरमा के के को बिल आउँछ ?
भुक्तानीको नयाँ तरिका –स्क्यान गरौं ।
आज पनि हामीलाई थाहा नभएर वा नयाँ प्रविधिलाई विश्वास नगर्दा बैंक वा विभिन्न सरकारी कार्यलहरूमा छोटो सेवाको लागि लामो लाइन बस्नुपरेको छ ।
आफूलाई अपग्रेड गर्नुहोस् र विभिन्न घरायसी बिलहरुको भुक्तानी गर्न सरकारी कार्यालय धाउन छोड्नुहोस् समयको बचत गर्नुहोस् ।
यसरी भुक्तानी गर्दा छुट तथा Cashback पनि पाइन्छ । त्यसैले अब MoBank गराैं ।
हरेक हप्ताको छैटौं कारोबारमा ६ प्रतिशत क्यासब्याक– सुपर सिक्स अफर ।
हरेक हप्ता आइतबार देखि शनिबार सम्म रु १०० भन्दा बढीको ६ वटा कारोबार गर्दा छैटौं कारोबारमा ६ प्रतिशतनै क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मोबैंकबाटै मोबाइल टप अप गर्दा ३ प्रतिशतसम्म Cashback प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मोबाइल टप अप गर्नुपर्ने छ ? मौका यहि हो ।
यसबाहेक पनि विभिन्न पसलहरुमा MoBank मार्फत भुक्तानी गर्दा थप Cashback तथा छुट अफर समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
घरमा के के बिल आउँछ ?
महिना पुग्यो बिजुलीको बिल, महिना पुग्यो पानीको बिल इन्टरनेट, टिभी, हवाई जहाजको टिकट, सरकारको राजस्व, इन्सुरेन्सको प्रिमियम, विभिन्न कलेज वा स्कुलको फि, क्यापिटल पेमेन्ट, किस्ता भुक्तानी, ब्रोकर पेमेन्ट, बस टिकट, सिनेमा हलको टिकट र केबुल कारको टिकट काट्नको लागि तपाई अन्त कतै जाने पर्दैन, अरु केही केही खोज्नै पर्दैन । एन आई सी एशिया मोबैंक तपाईलाई सेवा दिन पर्खिरहेको छ ।
पैसा नबोकि हिड्नुभयो वा तपाईसँग भएको पैसाले चाहेको सामान किन्न नपुगेर खिन्न मन बनाएर फर्किनु परेको छ ?
अब तपाई जहाँ हुनुहुन्छ मोबैंकले गर्दा बैंक तपाईको साथमा हुन्छ ।
तपाईले पसलहरुमा सामान किनिसकेपछि खल्तीमा पैसा नहुँदा पनि मोबैंक मार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गरेर सजिलै र तुरुन्तै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईसँग चेक वा एटिएम कार्ड छैन तर खातामा रहेको रकम निकाल्नु पर्ने छ भने पनि नजिकको बैंकको शाखा कार्यलयमा गएर स्मार्ट टेलर मार्फत टेलरमा राखिएको क्यूआर कोड मोबैंकबाटै स्क्यान गरेर सहज सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।
रकम लिने दिने होइन, मोबैंक गरौं ।
एन आई सी एशिया बैंककै जुनसुकै खातामा रकम पठाउँन वा अन्य जुनसुकै बैंकको खातामा रकम माबैंकबाट सजिलै पठाउँन सक्नुहुन्छ ।
मोबाइल नम्बरका आधारमा फोन पे डाइरेक्टबाट खाता नम्बरका आधारमा फन्ड ट्रान्सफरबाट र Connect IPS पनि छदैँछ ।
वालेट लोड गर्न, MoBank गरौं
तपाईले एन आई सी एशिया बाटै वालेट बाट गर्न सकिने धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ । तर, कहिलेकाँकी वालेट लोड गर्नुपर्याे भने चाँही मोबैंक समेत गर्न सक्नुहुन्छ ।
मोबाइलमै छ बैंक, त्यसैले अब MoBank गरौं ।
मोबैंकबाट के के गर्न सकिन्छ तपाईलाई थाहा छ ?
स्टेटमेन्ट हेर्नको लागि बैंक जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले मोबैंक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै Invoice History को लागि समेत मोबैंक छदैछ ।
त्यसबाहेक मोबैंकबाटै मुद्दती निक्षेप खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ ।
इन्टरनेट छैन चिन्ता छैन, मोबैंक गरौं ।
तपाईलाई मोबाइल रिचार्ज गर्नुपर्ने थियो, तर मोबाइलमा इन्टरनेट छैन भने के गर्नुहुन्छ ? फेरि रिचार्ज कार्ड किन्न पसल कुद्नुहुन्छ । पर्दैन है, तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट नहुँदा समेत मोबैंकबाट मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तै, तपाईको बैंकको खातामा रहेको समपूर्ण जानकारीहरु जस्तै, बैंकमा बाँकी रहेको रकम, Mini Statement, Check bookRequest, Statement Request समेत गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाई एन आई सी एशिया शाखा वा एटिएम नजिकै कहाँ छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ ?
तपाई मोबैंक बाटै तपाईको नजिकको एन आई सी एशिया बैंकको ब्रान्च र एटिएमको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ । यो सँगै तपाईले एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहक महानुभावहरुका लागि आफू रहेको ठाउँ नजिकै रहेका पसलहरुमा देखिने अफरहरुको बारेमा जानकारी समेत लिन सकिन्छ ।
फाइदा त छ, तर पासवर्ड विर्सेर चलाउन पाउनु भएन ? तपाईको पनि यस्तै मोबैंकको पासवर्ड बिर्सेर चलाउन पाउनुभएको छैन । त्यसको पनि चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईको मोबाइलको पासवर्ड बिर्सनुभयो भने सजिलै नयाँ पासवर्ड रिसेट समेत गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो पनि विना कुनै शुल्क ।
गुनासो छ,, मोबैंक गरौं एन आई सी एशिया बैंक तथा मोबैंकसँग सम्बन्धित कुनै पनि गुनासो जिज्ञासा छ भने तपाईले सजिलै हामीलाई गुनासो पठाउँन सक्नुहुन्छ । मोबैंक – छैन त चमत्कार ? त्यसैले अब MoBank गराैं ।
NIC ASIA MoBank को पासवर्ड बिर्सेर MoBank बाट कारोबार गर्न पाउनुभएन ?
कुनै चिन्ता छैन, तपाईले तुरुन्तै नयाँ पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ ।
पासवर्ड रिसेट गर्ने प्रकृया जान्न भिडियो हेर्नुहोस्ः
NIC ASIA MoBank डाउनलोड गरी आजै Activete गर्नुहोस् र डिजिटल कारोबारको आनन्द लिनुहोस् ।
Activate गर्ने प्रकृयाको लागि भिडियो हेर्नुहोस्ः
मोबैंकको चमत्कारिक फाइदा लिन
आजै, अहिलेनै मोबैंक डाउनलोड गरौं ।